4-Chlorodehydromethyltest testosterone powder Mpanamboatra & Mpamatsy - Pabanta
Rojo 4-Chlorodehydromethyltestosterone voly (2446-23-3) video
Raozy 4-Chlorodehydromethyltestosterone poopy (2446-23-3) Description
Chlorodehydromethyltestosterone dia steroid azo antoka ary matetika no voalaza fa manana fananana eo anelanelan'i Dianabol, sy Anavar. Turinabol dia tsy afaka ny aromatase ao amin'ny estrogen, noho izany dia mahalana ny estrogenic effects, na dia nisy aza ny tatitra sasany dia nomena ny marary gynocomastia malemy. Ny tena marina dia tsy azo antoka tanteraka, fa misy ny mety ho an'ny Turinabol manana fihetsika sasany eo amin'ny mpikatroka estrogen. Ny mety ho an'ny methyltestosterone manimba mandritra ny fizotry ny famokarana. Ny endriky ny androbe dia mbola azo atao, saingy tsy dia sarotra loatra izy ireo.
Ny roah 4-Chlorodehydromethyltestosterone dia poids croNUMX alpha alkylated steroide, mba hahafahan'ny fahafahana manimba ny fahavoazan'ny aty amin'ny fotoana famolavolana toeram-pivoahana izay ahitana azy. Ny fomba tsara tokony hitazomana ny dosages ao anatin'ny ambaratonga mety ary ny faharetan'ny fampiasana dia tokony ho voafaritra amin'ny manodidina ny herinandro 17 mba hisorohana ny hepatotoxicity. Ampiasao koa ny fanafody famonoana ny fo.
Roahina 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3) Specifications
Product Name Roahina 4-Chlorodehydromethyltestosterone vovoka
Anarana simika Oral turinabol; 4-Chloromethandienone
Drug Class Androgen, anabolic steroide
molekiolan'ny Formula C20H27ClO2
molekiolan'ny Wvalo 334.88
mitsonika Point 225-230 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 16 ora
Solubility Mazava ho azy fa tsy voakosoka
rano, malalaka tsy mety
chloroform, tsy misy loto
Application Ny 4-chloro-substituted derivative amin'ny metandienone (dehydromethyltestosterone).
Inona ny Rohan 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3)?
Turinabol (2446-23-3) dia steroide anabolika izay novolavola tamin'ny fanovana ny Dianabol. Ny steroid dia novolavola tamin'ny fampifangaroana rafitra simika roa an'ny Clostebol (4-chloretesterone) sy Dianabol. Izany no antony mahatonga ny anarana hoe chimodehydromethyltestosterone 4-chlorodehydromethyltestosterone. Ireo fiovan'ny rafi-pandehan'ny simia dia nanome ny toetra mahazatra izay mampiavaka azy amin'ny steroids hafa toy ny tsy misy aromatizable ary manana ny mari-pahaizana ambany indrindra amin'ny androgenic. Ity zava-mahadomelina ity dia manana tantara mahavariana ao ambadik'izany manazava ny fisondrotany sy ny fanjavonany eo amin'ny tsena.
Ahoana ny fomba ilain'ny rojo 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3) asa
Toy ny steroids hafa anabolic, Turinabol (2446-23-3) dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitehirizana sy ny proteinina ary ny fiarovana ny famokarana sela mena ao amin'ny vatanao. Ireo rehetra ireo, ireo toetra ireo dia tena ilaina amin'ny fampivoarana ny rivotra iainanao. Amin'ny ankapobeny, ny firafitry ny proteinina no singa fototra ao amin'ny fanorenana ny rantsam-batana miaraka amin'ny sentence izay tompon'andraikitra amin'ny taham-pahafatesana izay manangonan'ny sela ny proteinina amin'ny fihazonana azota mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ny fitambaram-pofoanao.
Rojo 4-Chlorodehydromethyltestosterone poids (2446-23-3) Dosage
Ao amin'ny tontolo ara-pahasalamana, ny dosin Turinabol dia matetika ambany, ary ny lehilahy marary dia voatendry handray ny 5 amin'ny 10mg isan'andro mba hahazoana ny hozatra na taolana tapaka. Amin'ny lafiny iray, ny marary vehivavy dia mandray ny dosin ambany indrindra ao Turinabol amin'ny 1mg isan'andro fotsiny ary raha tsy tokony hihoatra ny 2.5mg isan'andro ny fitomboana. Mampitombo ny toetran'ny lahy eo amin'ny vatany ny zava-mahadomelina, ka noho izany, ny mpampiasa vehivavy dia ampirisihina foana hanome dosie ambany mba hisorohana ny virilization.
Raozy 4-Chlorodehydromethyltestosterone (2446-23-3) ampiasaina